Trafikana fitaovam-piadiana : Tra-tehaka ny basy poleta miisa 7 -
AccueilRaharaham-pirenenaTrafikana fitaovam-piadiana : Tra-tehaka ny basy poleta miisa 7
13/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Olona valo hatreto no voasambotry ny zandary teto Antsirabe vokatry ny velam-pandrika natao tamin’ireo mpanao aferana-basy. Tratra niaraka tamin’izy ireo ihany koa ny basy poleta vita gasy miisa 7 miaraka amina bala 9mm miisa 20.
Nahare vaovao mahakasika fivarotana basy tsy ara dalana izay teto anivon’ny borigady Andranomadio hoy ny kaomandin’ity vondron-toby ity, marihina hoy ny GPH2 Damy Bevahiny fa ela no nahafantatra ny fisian’io izy io ka niroso tsikelikely tamin’ny velam-pandrika izahay. Nilazana ireto mpivarotra basy fa misy olona afaka mandray azy any ho any, ka ny datin’ny 6 jolay lasa teo no indreo fa tonga tokoa ny iray ka noraisim-potsiny niaraka tamina basy poleta vita gasy roa. Nandritra ny fanadihadiana no nahatratrarana tsikelikely ireo namany tamin’ny alalan’ny velam-pandrika hatrany. Tsy ela dia tafiakatra 8 no voasambotra ka fantatra fa ny iray dia mpitsinjara ny basy, mbola nahitana basy poleta 3 tany aminy, ny iray hafa voasambotra tany ambanivohitra isan’ny nividy basy izy io, ary ny mpamatsy azy ireo dia vosambotra teny amin’ny fasan’ny karana. Ankoatra azy ireo dia iray hafa mpibizina koa no voasambotra.
Raha ny fahitana ireo basy poleta vita gasy ireo ety ivelany moa dia mitovy tsy misy valaka amin’ireny basy avy ivelany ireny mihitsy. Nambaran’ny zandary anefa fa mety ampidi-doza mihitsy ny fampiasana azy ireo satria tsy manara-penitra loatra. Bala 9mm, izay nambara fa voararan’ny lalana tanteraka ihany ko no mbola sarona niaraka tamin’ireo basy ireo.
Araky ny antontanisa nambaran’ny zandary, mahatratra 30 mehery ny basy efa saron’ny zandary tao anatin’ny 2 taona raha toa ka 10 kosa no efa sarona tamin’ity taona teto Vakinankaratra.
Voatery tazomina ao amin’ny borigady moa ireo voapanga ireo mandra-piverenan’ny fitsarana miasa indray.